छम पनीर र जाम संग स्वादिष्ट muffins
Muffins - cupcakes 100 भन्दा कम G वजन र सामान्य हुनत नाम विदेशी सुनिन्छ, यो सम्भव घरमा तिनीहरूलाई आफैलाई तयार छ, सानो हो। गरेको परम्परागत नुस्खा सुरु गरौँ - जाम संग muffins, र त तपाईं देखाउन कसरी पनीर, छम अन्य दिलकश सामाग्री तिनीहरूलाई खाना पकाउनु।
स्ट्रबेरी जाम संग muffins
एक स्वादिष्ट मिठाई muffins तयार गर्न, तपाईं दही को 200 ग्राम र वनस्पति तेल को7चमचा दुई अन्डा मिश्रण गर्न आवश्यक छ। अर्को कचौरा मा नुन को एक चुटकी र चीनी को 100 G मिश्रण2कप बेकिंग पाउडर संग आटे (2 घण्टा। एल)। त्यसपछि दुई मिश्रण र राम्रो आधा भरण Bakeware गर्न मिश्रण। भिजेको चम्मच परीक्षण नाली गरिरहेका र त्यहाँ स्ट्रबेरी जाम को एक spoonful राखे। ओभन तपाईं अलिकति, धुलो चिनी तिनीहरूलाई pritrusit सक्नुहुन्छ धेरै स्वादिष्ट बाहिर बारी muffins Bake जब बारे मा 30 मिनेट आवश्यक हुनेछ!
चकलेट muffins चेरी संग
अर्को मिठाई नुस्खा। को grater मा चकलेट को 100 ग्राम (जस्तै, दूध) RUB। एक गरम पैन मा मक्खन को 100 G राख्नु र आफ्नो बिभाजनमा नरम बन्न र त्यसपछि चीनी र चलाउनु को 100 ग्राम थप्न Mash। त्यहाँ पनि3अन्डा ड्राइव र वजन एकरूपता सम्म मिश्रण गर्न प्रयास, त्यसपछि चकलेट खन्याउन। अब तपाईं पीठो को 200 ग्राम र पाक पाउडर को spoonfuls को एक जोडी थप्न र राम्रो ब्लेंडर पिटे गर्न सक्नुहुन्छ।
तेल धब्बा सामूहिक मात्रा र फारम को 1/3 मात्रा प्रत्येक आटा मा राखे। प्रत्येक muffin को केन्द्र मा 1 ताजा मा चेरी राख्नु, र शीर्ष थप्न एक सानो आटा (को मोल्ड को मात्रा को 2/3 भरिएको हुनु पर्छ)। यो मिठाई बारेमा 25 मिनेट को लागि सुखा छ।
छम पनीर संग मसालेदार muffins
Muffins मात्र मीठा हुन सक्दैन। तिनीहरूले, उदाहरणका लागि तयार हुन सक्छ, छम पनीर संग। 150 ग्राम हार्ड पनीर (कुनै पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ) घन मा कटौती गर्नुपर्छ र grated Parmesan पनीर को 50 G rubbed। सँगै चम्चा पत्रमार्फत2सचेतक अन्डा दूध 250 एमएल र पाँच तेल ट्रे खन्याउन र मसाले राख्न:2pinches तुलसी र Rosemary, 1 - लाल शिमला खुर्सानी, को खुर्सानी मिश्रण - एउटा सानो चम्चा को एक चौथाई। पीठो (400 ग्राम) एक disintegrant र चलनी पाउच संग मिश्रित थियो, र त्यसपछि अन्डा मिश्रण गर्न थप गर्नुहोस्। कटा पनीर र कटा पकाएको छम 100 G अतिरिक्त थप, आटा मुछ्नु। पूर्व-oiled छन् जो सामूहिक मात्रा, मा आटा राख्नु र ब्रेडक्रंब संग छिडकना। लगभग 20 मिनेट Bake आवश्यक छ, त्यसपछि liberally छिडकना पनीर पस्त र छम पनीर अर्को 10 मिनेट Muffins लागि ओवन मा राखिएको तयार छन्, तपाईं भोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै मसालेदार र तेज पनि cupcakes छ भनेर नबिर्सनुहोस्। तपाईंले यी व्यञ्जन चाहनुहुन्छ भने, निम्न नुस्खा गर्न muffins पकाउन।
छम पनीर संग muffins
सानो घन 100g tvordogo पनीर र छम मा कटौती। नुन र मरिच र whisk तीन अन्डा, त्यसपछि यसलाई दूध 150 एमएल थप्नुहोस्। सबै मिश्रण,2घण्टा थप्न। एल disintegrant, पनीर, नरम घिउ र छम 100 ग्राम, पीठो 250 ग्राम खन्याउन। आटा मुछ्नु, यो सामूहिक मात्रा को 2/3 भर्न र 30 मिनेट को लागि Bake। छम पनीर तयार संग muffins।
किसमिस र दलिया संग muffins
एकदम बस दलिया र किसमिस संग हार्दिक muffins पकाउन। दालचिनी, बेकिंग सोडा र पाक पाउडर को एक चम्मच संग जई अनाज को आधा कप मिश्रण। दूध 200 एमएल, आधा कप ब्राउन सुगर, वनस्पति तेल, अण्डा सेतो र किसमिस को 1 कप को4चमचा थप्दा। सबै राम्ररी मिश्रण र सामूहिक मात्रा भर्नुहोस्। Muffins 20 मिनेट Bake।
टूना संग muffins
भाँडा अर्को असामान्य भेद। यो गर्न, टूना डिब्बे सामग्रीहरू एक काँटा संग Mash stogrammovoy।2अन्डा बिट र फल बिना दही एक गिलास खन्याउन, को टूना, कटा साग को 1 spoonful, पीठो र पाक सोडा को आधा चम्मच को4चमचा राखे। आटा मुछ्नु। मोल्ड तेल lubricated हुनुपर्छ, पीठो संग छिडकना, र त्यसपछि परीक्षण भर्नुहोस्। सारा जैतून संग कवर pitted। पकाउने समय - 20 मिनेट।
पनीर संग muffins
2, अन्डा, चम्चा जीरा संग 250 जी खट्टा क्रीम मिश्रण आवश्यकता तयार, तेल को 100 ग्राम मक्खन, पाउडर पकाना2चम्मच, साथै आधा चम्चा मरिच र नुन को नरम। सबै हलचल र पीठो थप्न स्थिरता एक मोटी खट्टा क्रीम जस्तै थियो भनेर। कच्चा 100 ग्राम (आवश्यक कठोर) diced पनि आटा मा राखे। अब यो सामूहिक मात्रा मा कुटपिट खन्याउन र तिल को बीउ र पाक्नु संग छिडकना गर्न आवश्यक छ।
आशा छ छम पनीर र मीठो muffins संग muffins तपाईं आनन्द उठाउन आशा!
Chum सामन, ओवन मा सुखा, दुई पकाउने नुस्खा
Zucchini संग Lagman: सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु
Hitch भोजनालय (सेन्ट पीटर्सबर्ग, Moskovsky Prospekt): समीक्षा, वर्णन र समीक्षा